Fampijaliana rano - Analogy analogy mandeha amin'ny tetezana lavitra loatra | Martech Zone
Fampijaliana rano - Ny tetiarana iray amin'ny analytics dia lasa tetezana lavitra loatra
Alarobia 12, 2015 Jim Sterne
Ny data, toy ny rano, dia misy endrika maro. Ny sain'olombelona dia nivoatra mba hanivana ny ankamaroan'ny angona izay tonga eto amintsika satria misy ny ankamaroany.
Rehefa manokatra ny masonao sy ny sofinao ianao, dia misy hatraiza hatraiza ny angona. Ny lokon'ny rindrina, ny feon'ny fanamafisam-peo ary ny fofon'ny kafe mpifanolobodirindrina aminao dia raisina toy ny hamandoana. Ny rivotra dia eny amin'ny rivotra foana fa tsy ilaina ny mitandrina tsara amin'izany.
Rehefa miraoka ao anaty zavona ny rano dia manery anao hahita azy io ary mahatonga ny fahatakarana izao tontolo izao manodidina anao ho sarotra kokoa. Ny tahiry tsy feno, ny angon-drakitra simba, ny siansa ratsy, ny fehin-kevitra diso ary ny fitongilanana kognitive dia mahatonga anao tsy hahita ny làlan'ilay zavona.
Milatsaka toy ny orana ny angona. Rehefa kely fotsiny dia tsy mahafa-po izany - ampy fotsiny handotoana ny fiaranao sy hampisavorovoroana ny resaka. Hitanao fa mamafa ny masonao eo amin'ny solomaso ianao rehefa misy olona mandefa teboka angon-drakitra vitsivitsy azo avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Rano stale any anaty dobo marivo no mampidi-doza. Ny data, angonina avy amina tahiry tsy azo itokisana, na tsy nodiovina na namboarina ary navela hitombo, dia mety hitarika fehin-kevitra diso.
A mitete ny rano dia mety ampy hamenoana cantine na hitohizan'ny tontolo iainana ny ala. Teboka data telo fotsiny (ny isan'ny mailaka nalefa, mifanohitra amin'ny fisokafana, mifanohitra amin'ny tsindrio) dia afaka manohana programa marketing.
A fikorianan'ny fahasalamana ny angona amin'ny endrika renirano kely dia azo ampiasaina amin'ny fandroana. Ny fikorianan'ny angon-drakitra mitohy mamela ny benchmarking sy ny fampitahana manan-tantara. Ny fanatsarana ny pejy fitobiana dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny angon-drakitra tsy miovaova.
A renirano maotina afaka mamatsy fikosoham-bary hahita hazo na mitoto vary. Ny motera fanoloran-kevitra dia tsy mila afa-tsy ny fandraisana anjara azo itokisana avy amin'ireo tributaries vitsivitsy hanomezana fiakarana ny lanjan'ireo sarety fiantsenana.
A riandrano Ny afaka mandroso lohan-drano lehibe ary fampahalalana marobe mety hampandeha rafi-pitantanana votoaty tena izy.
A river malalaka sy lalina izany dia afaka manohana indostrian'ny fitaterana iray manontolo. Ny angon-drakitra ampy dia afaka mitsingevana sambo sy sambo mpitondra entana amin'ny endrika fanangonana cookies avy amin'ny tamba-jotra dokam-barotra, mpanangona angon-drakitra fandaharana momba ny kara-pahatokisana, ary mpizara data.
Rehefa tonga ny angon-drakitra amin'ny isa andrasana amin'ny fotoana andrasana, dia azo samborina, ampitaina ary ampiasaina. Ny rafitra fanondrahana, tohodrano ary fitahirizana dia manome fahatsapana fifehezana ary mamela ny fananganana fotodrafitrasa mihalehibe hatrany miaraka amin'ny lakandrano, hidin-trano ary tohodrano. Ny trano fanatobiana angona dia natsangana tamin'ny fantsom-pitokisana tsy dia atokisana intsony.
Ny fahadiovana dia eo akaikin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra
Ny rano madio dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fiainana, fanondrahana, famokarana herinaratra mandeha, sns. Ny famaritana ny hoe "madio" dia mety hiova ho an'io tanjona io; tsy maninona raha misy ahidrano ao anaty rano izay mampangatsiaka ny toby famokarana herinaratra ary tsy azo ekena izany raha misy ampahany 10 mahery isaky ny miliara arsenika amin'ny rano fisotro.
Ny data dia mitovy. Amin'ny fangatahana mailaka mivantana, tsy misy dikany izany raha manana anaram-boninahitra olona ianao (Andriamatoa, Ramatoa, Ramatoa ... raha tsy mandefa any amin'ny dokotera ianao. Fa ny angon-drakitra maloto dia hahasarika anao isaky ny mandeha.
Amin'ny maha-mpahay siansa data amerikana anay, DJ Patil, apetraho amin'ny Fivoriamben'ny CTO fihodinana voalohany, “Raha tsy mieritreritra ny hitandrina ny tahirin-kevitrao ho madio hatrany am-piandohana ianao, dia efa f & ¢ & ed. Manome toky azy aho. Maharitra am-bolana farafahakeliny ny fiezahana manadio azy io aorian'ny zava-misy. ”
Raha manafana ny rano amin'ny toerana mangotraka ianao dia afaka mamorona Revolisiona Indostrialy iray manontolo. Toa manao zavatra mitovy ny data. Hatramin'ny fotoana ahafahan'ny solosaina mitahiry sy manisa, ny angon-drakitra dia voaangona haingana araka izay azo namoronana ireo fitaovana fitahirizana hanaovana izany.
Ny Farihy Data
Rehefa mivezivezy amin'ny alàlan'ny motera fitotoana ny angon-drakitra avy amin'ireo tributaries ireo dia miafara any amin'ny farihy, ao ambadiky ny tohodrano. Satria avoaka amin'ny fomba voafehy ny angon-drakitra, dia manome herinaratra ny turbinin'ny indostrian'ny angona; ireo motera goavam-be fanodinana angona misy anarana toa Google sy Facebook. Tsy hisy haintany eto.
Ary farany, misy dobo rano lalina, miandry ny filentehan'ny mpandalina. Fitaovana scuba sy basy lefona eny an-tànany, manadihady ny lalina ny mpanao fandalinana, manao sarintany tany vaovao ary mahita karazana vaovao. Fotoana mampientam-po tokoa amin'ny maha-mpikaroka data.
Izany no antony maro amin'izy ireo no tonga nanatrika ny Fihaonana an-tampon'ny eMetrics nanomboka tamin'ny 2002. Ny fotoana manaraka dia any Boston, 27 septambra hatramin'ny 1 Oktobra 2015.
fisoratana anarana amin'ny Vovonana eMetrics
Ary ahoana ny herin'ny angon-drakitra handrafitra ny Grand Canyon manaraka? Ahoana ny amin'ny fihenan'ny glacial ny angon-drakitra voaorina? Ahoana no fomba hitondrantsika ny rano maloto eto amin'izao tontolo izao izay lasa tsy mahalala tsiambaratelo?
Ireo no fanontaniana amin'ny fotoana hafa sy rano ambanin'ny tetezana.
Tags: AnalyticsDatafahadiovana datadata scienceemetrikafihaonamben'ny emetrika
Jim Sterne dia consultant iraisampirenena izay mifantoka amin'ny fandrefesana ny soatoavina mamorona sy manamafy ny fifandraisan'ny mpanjifa. Sterne dia nanoratra boky valo momba ny varotra fifandraisana, ny filoha mpanorina ary ankehitriny ny filohan'ny Fikambanana Digital Analytics ary mamokatra ny Fihaonana an-tampon'ny eMetrics ary ny Fihaonana an-tampon'ny Media Analytics.
Votoatin'ny kalitao sy habetsahana: Ny ROI amin'ny fanoratana kely kokoa